I-I-Tips vs Microlinks - Konke Odinga Ukukwazi Ngaphambi Kokufaka Izan – SL Raw Virgin Hair LLC.
I-Amathiphu vs Microlinks? Yikuphi okufanele ukhethe? Uma uhlela ukukufaka noma yikuphi, nakhu konke okudingeka ukwazi ngaphambi kokufaka izandiso zezinwele ze-microlink.
Jan 31, 2022 | SL Raw Virgin Hair
Kunesizathu esisebenzisana nabo kwezokuthengisa babevame ukudideka lapho usibiza futhi besicela ukuthenga izandiso ze-microlink ku-inthanethi noma izandiso zezinwele ze-microlink ezithengiswayo.
Ekupheleni kwalokhu okuthunyelwe, uzokwazi futhi ukuthi kungani. Futhi kungani kungafanele ubuze leyo mibuzo emibili uma uya esitolo sakho se-ecommerce esiyintandokazi sokunweba izinwele.
Ngakho-ke, lokhu okuthunyelwe okufundisayo okusheshayo kuzo zonke izinto ezincane nama-I-tips nakho konke odinga ukukwazi ngaphambi kokuthenga nokufaka izandiso zakho.
Kodwa okokuqala …
Uhlu lwamagama e-microlink
Ngaphambi kokuthi singene engxoxweni, asidlule ngokushesha emagameni ambalwa ukuze siqonde kangcono umehluko, izandiso, kanye nenqubo.
Ihlanganisa imicu yezinwele ezihlanganiswe ne-keratin ekugcineni (njengezandiso ze I-amathiphu ozozibona lapha). Cabanga ukuthi intambo yezicathulo ibukeka icijile kanjani phezulu, kodwa incane kakhulu enezintambo zezinwele.
Izandiso zezinwele ze-I-tip ziyizintambo nje zezandiso zezinwele (futhi akufanele zidideke njengesevisi).
I-Micro iyingxenye yama-microbeads. Ama-Microbead asetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ezehlukene zokunwetshwa kwezinwele okuhlanganisa izandiso zezinwele zobuhlalu I-I-tip kanye nama-weft-lessless wefts.
> Le sevisi yaziwa nangamanye amagama ambalwa, okuhlanganisa: ukufaka kwe-braidless weave, uhlelo lwesi-Malaysian, i-micro bead weft noma ngezinye izikhathi uhlelo lokusebenza lwesixhumanisi esincane.
Ngakho, njengoba manje sesiyiqonda imigomo esizoyisebenzisa, ake sehlele phansi ekubuyekezeni amathiphu e-I ngokumelene nama-microlink.
Kungakho isihloko se-I-Tips vs Micro links?
Ngoba, njengami ngesinye isikhathi, besilokhu sidida lezi zinto zombili, sizisebenzisa ngokushintshana, futhi azifani.
Yingakho ngisho lokho.
(Umthombo: Ingxoxo ka-LeAna McKnight, umsunguli we-SL Raw Virgin Hair nge-POPSUGAR. Ungakwazi ukubuka yonke inhlolokhono lapha.)
Isixhumanisi esincane yindlela ephikisana nohlobo lwezinwele. Izandiso zezinwele ze-I-tip kanye nama-wefts yizinwele ezisetshenziselwa isevisi yakho yesixhumanisi esincane. Kuyindlela ebukeka yemvelo yokwelulwa kwezinwele esikhundleni sokukhilosha kanye nezandiso zokuthunga.
Ama-Microlinks iyisevisi enhle kakhulu yabantu:
Ufuna izinwele zezinwele ezigeleza mahhala ezinobude obude, ezimboze ngokugcwele, kanye nokuminyana okukhuphukile kwezinwele zabo (akuzona ezevolumu eyeqisayo - uzodinga ukuvala noma iwigi kulokhu)
Ufuna izandiso kodwa ube nendlela yokuphila esebenzayo, ngakho udinga okuthile okuguquguqukayo nokulula ukuphatha
Thanda ukugqoka izinwele zakho ngezitayela ezahlukene, ezifaka amaponytails kanye nezinto ezinhle
Awufuni ukusebenzisa ukushisa noma iglu ekufakeni izinwele zakho ukuze ukwazi ukuvikela ukulimala kwezinwele zakho
Isu lokusebenzisa i-microlink
Ama-Microlink angasetshenziswa ngezindlela ezimbili ukuze kuzuzwe izandiso ezibukeka ngokwemvelo ozihambelayo
I-Microlink/Cold Fusion Technique
Isevisi ye-microlink iqukethe ukunamathisela izandiso zesixhumanisi sezinwele ze-I-tip ezinweleni zakho ngemicu emincane ngesikhathi. I-stylist yakho izosebenzisa ithuluzi lokubopha ukuze ibambe i-aluminium noma i-microbead yethusi ezungeze iqoqo elincane lezinwele zakho kanye nesandiso se-I-tip kumathiphu amancane e-keratin emicu. (Bona isibonelo samathuluzi ezinwele ze-microlink nezisetshenziswa lapha.)
Le sevisi ingabiza noma yikuphi phakathi kuka-$800-$2000, kuye ngenombolo yezandiso zethiphu ye-I ozifakayo. Lokhu kuncike endaweni yakho kanye nesitayela sakho futhi akubandakanyi amathiphu e-I, azodinga ukuthengwa ngokuhlukana. Ukufakwa kokufakwa okugcwele okujwayelekile kuzosebenzisa izixhumanisi zezinwele ze-I-tip ezingu-200-250.
Isikhathi sesevisi sale nqubo amahora angu-4-7, futhi kuya ngenani lezandiso ze-I-tip ezisetshenzisiwe.
2 Isandiso se-Micro bead weft
Isandiso se-Micro bead weft (aka micro weft) yisevisi equkethe izinsimbi zezinwele eziboshelwe ngobuhlalu obuncane.
Ama-weft axhunywe ezinweleni ngokuluka imicu yezinwele zakho kuma-wefts bese uvikela zombili nge-microbead. Okokuqala, ama-wefts azovikelwa endaweni kusetshenziswa iziqeshana zezinwele. I-stylist yakho izobe isisebenzisa intambo yezinwele ukuxhuma ucezu lwezinwele kusuka ku-weft kanye ne-microbead eduze kwekhanda lakho. Ama-wefts abe esenqunywa phezulu ezinweleni zakho usebenzisa ama-microbeads.
Ibanga lentengo lesevisi yesandiso ye-microbead weft lingaqalisa ukusuka ku-$400-$1000 kuye ngenani lama-weft/amathrekhi asetshenzisiwe. Izindleko ezisohlwini lapha zohlelo lwe-Braidless weft azibandakanyi ama-weft, ozodinga ukuwathenga ngokuhlukana. Futhi amanani ayahluka ngokusekelwe endaweni kanye nesitayela.
Isikhathi sesevisi esilindelekile siphakathi kwamahora angu-2-4.
Okuthunyelwe okwabiwe yi-HAIR EXTENSIONS (@weaveology_)
Ithiphu ye-Pro Hlela ukubonisana nomhleli wakho ngaphambi kokuya kusevisi. Ingxoxo kufanele ihlanganise ukuma kobuso bakho, izinhloso zakho, indlela yokuphila, nesimo sezinwele (eziminyene, ezizacile, ezilimele, njll.) ukuze unqume ukuthi zingaki izandiso ze-I-tip noma ama-wefts azodingeka ukuze ufeze ukubukeka kwakho okufunayo. (Noma kufanele uzame lesi sitayela, ikakhulukazi uma izinwele zakho zonakele okwamanje).
Imibuzo esivame ukuyithola mayelana ne-I-tip kanye nezandiso zezinwele zama-microlinks
Njengengcweti yesitayela, umsunguli wethu uhlangabezane nemibuzo embalwa phakathi neminyaka mayelana nama-I-tips nama-microlink.
Ngakho-ke, sizokuphendulela ezimbalwa zazo. (Futhi uma unabanye, zizwe ukhululekile ukubashiya kumazwana. Ungakwazi futhi ukubuka ingxoxo yakhe kanye namazwana angeziwe mayelana nezandiso zezinwele zama-microlink nge Impilo Yabesifazane Mag lapha.)
Ingabe izandiso ze-microlink zilimaza? Ingabe ama-microlink aphephile ezinweleni zemvelo?
Yebo, ngokuvamile, lena indlela ephephile yokwandisa izinwele.
I-Microlink ayidingi ukusetshenziswa kokushisa, amakhemikhali anonya, noma izinto zokunamathisela ukuze zifakwe, Ngakho-ke, inketho enhle yokwandisa uma ukhathazekile ngokulimaza izinwele zakho. Futhi kunciphisa ukungezwani ekhanda lakho njengoba kungadingi ukuthi izinwele zakho zilukwe phansi kuma-cornrow kuqala, ngokungafani nezinye izindlela zokunwetshwa.
Kudingeka futhi uqinisekise ukuthi umhleli wakho wesitayela uqeqeshiwe futhi wazi kahle ukuthi ungazifaka kanjani kahle izandiso zakho ze-I-tip noma ukufaka i-braidless weave.
Ingabe i-microlink ingasetshenziswa ezinweleni ezikhululekile?
Yebo, ungasebenzisa indlela ye-microlink ngezinwele ezikhululekile kanye nezinwele zemvelo Ungakwazi ukufinyelela amathiphu e-I kanye nezandiso zezinwele ze-wefts ezingafanela zonke izinhlobo zezinwele ukuze zisetshenziswe kalula.
Izandiso zama-microlink zihlala isikhathi esingakanani?
Izixhumanisi zingahlala kusukela ezinyangeni ezintathu kuya kweziyisihlanu ngokulungiswa okufanele. Izinwele ezisetshenziselwa le sevisi zingahlala unyaka noma ngaphezulu ukuze uthole ukufakwa kwe-two noma okuningi kwe-microlink kuzinqwaba zakho.
Ubude besikhathi buphinde buncike ekutheni uhlela kaningi kangakanani izikhathi zokubonana ukuze uqinise/uphushe ubuhlalu (kunconyelwa njalo emavikini ama-3-5) futhi uhlanze kahle izinwele zakho.
Futhi, lala ngesikhafu sikasilika noma se-satin noma ibhonethi ukuze ulondoloze izandiso zakho futhi uvimbele ukudonsa nokuhlanganisa ngokweqile.
Ngiwagcina kanjani amathiphu wami we-I noma ukufakwa kwesixhumanisi se-wefts micro?
Ngaphezu kwesevisi yokuphusha, kuyanconywa ukuthi ugeze futhi ulungise izinwele zakho kanye ngesonto. I-conditioner namafutha kungabangela ukushelela kwesixhumanisi ngakho-ke zama ukungasondeli kakhulu esikhumbeni.Futhi njengoba usual, qaphela imikhiqizo oyisebenzisa ezinweleni zakho
Lapho ukaka, sebenzisa imivimbo ethambile ukuze ungabangeli ukushelela noma ukulimala ezinweleni zakho njengoba ama-I-tips noma ama-wefts anobuhlalu obuncane/eboshiwe ezinweleni zakho.
Ubani okungafanele athole isevisi ye-microlink?
Uma izinwele zakho zingekho okungenani amayintshi angu-4 ubude, asincomi ukwenza le ndlela yokwandisa izinwele. Futhi, uma izinwele zakho zijwayele ukwephuka ngenxa yokuhlukaniswa, zihlushwa ukuchitheka ngokweqile, noma zonakaliswe okwamanje, lokhu kungase kungabi isandiso sezinwele esingcono kakhulu kuwe.
Kuzodingeka futhi uzibophezele ekuwasheni nasekulungiseni izinwele zakho njalo. Ngakho-ke, uma leyo kungeyona you, ungase ucabange enye indlela yokwandisa.
Imicabango yokugcina kusevisi ye-microlink
Engxoxweni ngamathiphu e-I uma kuqhathaniswa nama-microlink, kubalulekile ukuqonda umehluko phakathi komkhiqizo (isandiso sezinwele) kanye nesevisi (indlela esetshenziswa ukufaka izandiso)
Ukukhetha uhlobo lwezinwele olufanele nakho kubalulekile ukuze uqinisekise ukuthi izandiso zihlangana kahle nezinwele zakho zemvelo. Lokhu kwenza kube lula ku-maintenance. Futhi njengoba amathiphu e-I nama-weft etholakala ngezindlela ezihlukahlukene ukuze afanele noma yiluphi uhlobo lwezinwele, ungathola olufana nolwakho.
Futhi uma usuvele uxoxisane no-stylist wakho? Yibe usudlulela ku-SL Raw Virgin Hair bese ukhetha ekukhetheni kwethu izinwele zemvelo zikanokusho ezingu-100% zandiso ze-keratin I-tip zesevisi yakho ye-microlink noma ama-weft athungela ngaphakathi alungele izandiso ezingalukwanga.
Kinky Curly I-Tip Hair (50 pcs)
16 inch - $109.50 18 inch - $119.50 20 inch - $129.50
Beauty bloggerbraidless weavecold fusionsfusion hairhair bloghair educationhair extensionshair guidehair tipshair trendsi-tipsitipskeratin tipsmicro beaded weftmicro beadsmicro linkmicro linksmicrolinkmicrolinks vs I-tipsSL Raw Virgin Hairstrand by strandthings to know